Pakistan: Mitombo ny hatezerana manoloana ny tsy firaharahàn’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2010 16:05 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Fizarana fanampiana taorian'ilay tondra-drano tany Pakistana, ny 2 Aogositra, 2010. Sarin'i Globovisión nalaina tao amin'ny Flickr. CC BY-NC
Mihoatra ny 1500 ny maty taorian'ireny oram-be nisesisesy ireny ka niafara tamina tondra-drano mihitsy tany amin'ireo faritra samihafa tany Pakistana. Anarivony ireo nanjary tsy manan-kialofana ary ny maro hafa kosa mandositra ny hanoanana sy ny fahafatesana. Araka ny vinavinan'ny Firenena Mikambana dia 4 tapitrisa ireo mponina tra-boina. Niteraka fahasimbàna tany amin'ny faritra avaratry ny firenena ireo tondra-drano mavesatra ireo, namoizana ain'olona ary mbola manahirana ny sain'ny afovoan'ny tanibe, Karachi, ny fifamonoana sy ny fifandonana ara-poko. Fara-fahakeliny 62 ireo olona namoy ny ainy, tao anatin'ireo telo andro nisian'ny herisetra taorian'ny famonoana mpanao politika iray. Nivadika ho hatezerana ny alahelo rehefa lasa nandeha tany ivelany ny Filoha na dia teo aza ireo trangan-javatra mampitahotra niseho teo amin'ny firenena sy ny tsy firaharahàny ireo fanoherana mivaivay.
Maro ireo ao amin'ny twitter, anisan'izany ireo mpanao politika, no nifanome tànana amin'ny fanakianana ny dian'ny Filoha any Eoropa:
@ijazulhaq: Mbola manohy ny filan-tsasatrany manokana ihany ny Filoha raha mijaly kosa ny vahoaka. Mihetsiketsika amin'ny alalan'ny sary ireo Mpitarika.
@Naeem705: Tonga soa eto pakistan! <zardari pvt limited>, izahay dia orinasa voafetra amin'ny andraikitra (SARL)! (tataon-ketra @ 10%)
@Amna_Saeed: Tsy mampino hoe makamaka aina any Eoropa i Zardari raha ny vahoakantsika kosa maty amin'ireo tondra-drano ireo . “Wth”!? Ahoana no ahitàny tory?
@bentusman: Ny New York Times, Telegrah, The Independent The Sun, The Daily Mirror sy ireo maro hafa dia manainga an'i Asif Zardari hiverina any Pakistana #shame #pkfloods
@fbhutto: 32 ireo maty any Karachi tamin'ny vono olona nataon'ny MP. 2.5 tapitrisa no voan'ny tondra-drano. Makamaka aina any UK ny Filoha. Ary mangataka. Na dia efa maka aina matetika aza.
Tsy ilaina akory ny miteny fa mandalo fotoan-tsarotra i Pakistana. Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny maty isanandro dia lasa filàna maika ny fanànana fandrindrana ho fiarovana amin'ny loza tsara kokoa, na loza voajanahary izany na korontana sivily. Na dia izany aza anefa, amin'ny fanaovan'ny Filoha ho tsinontsinona ny zava-dratsy mitranga, lasa sarotra ny fifehezana izany zava-misy izany.
Ao amina lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ” Fotoana ho an'ny Fitantànana – A Time For Governance” Naveen Naqvi dia manamafy ny lanjan'ny Fitantànana, somary laroiny hatezerana kely:
Ny renivohitra ara-toekaren'i Pakistan dia vita avy amina tanànan'angatra sy arabe mangingina, ny fanaovan-draharaha mikatso, paompy fakàna solika, birao sy toeram-pivarotana mikatona. Moa tsy tahaka ny hoe tsy afaka naminaviana na dia ny fipoahan'ny fihenjanana fotsiny aza isika. Na eo aza izany, ny fifofoana ny ain'ireo ao amin'ny MQM sy ireo mafàna fo ANP na koa ny fifandonana mitam-piadiana nisy teo amin'ny Muhajirs sy Pathans dia mbola tsy mijanona efa ho volana vitsivitsy izao (..). Anatin'izany ny fitarainan'ireo Pakistane mikasika ny fiandrasana ela loatra ataon'ny fitantànana, eto dia mbola fotoana very maina hafa ihany izany. Mihamitombo ny isan'ny vahoaka manontany mikasika ny famatoran'ity mpitondra Asif Ali Zardari izay very laza sahady ity. Fa maninona no mety hanafoana ny diany an'i Eoropa ny Filoha? Fa maninona izy no mety hijanona miaraka amin'ny vahoakany anatin'ny fotoan-tsarotra sy toetr'andro be tafio-drivotra ka hiara-mitoetra amin'izy ireo? Ny valiny izay tonga ho azy ato an-tsaina dia ny hoe tsy miraharaha azy ireo izy.
Kalsoom Lakhani ao amin'ny CHUP mamerimberina ny fahatezerana sy ny fisahiranan-tsaina mankany amin'ny Filoha:
Raisina ity faharavàna goavam-be ity, sy ilay onjan-drano nahafaty tany Karachi izay namoizana ain'olona 47 taorian'ny famonoana ny MQM-n'i Raza Haider, tsy hatao mahagaga velively fa tezitra amin'ny Filoha Asif Ali Zardari ny firenena manontolo, izay tsy eo noho ny fitsangantsanganana manerana an'Eorope raha rendrika kosa i Pakistana. Tsy misy iraharahana na ilaina manapa-kevitra mifanaraka amin'ny fanampiana mikasika ity loza ity i Zardari na ho isan'olona fotsiny, ny fanapahan-keviny hanohy hatrany ity diany ity dia toa miala amin'ny tena zava-misy sy tsy firaharahàna, ary tsy manova ho tsara kokoa ny lazany izay efa tena ratsy.
Any amin'ny faramparan'ny lahatsorany i Kalsoom dia manisy marika tena mitombina:
Azo antoka fa izao no fotoana tokony hahatezitra antsika amin'ireo mpitondra antsika, na ny tsy fisiany, fotoana ihany koa izao hampifantohana ny herintsika amin'ny fanampiana ireo vahoaka maro mila vonjy.
Angamba ny zavatra tena ilain'i Pakistana amin'izao fotoana izao dia ny fifantohany amin'ny fanampiana an'ireo rehetra niharan'ity tondra-drano ity sy fifantohana amin'ny filàna fifehezana ireo korontana sivily mba tsy hihombo. Tena mety mihitsy ny lohatenin'ilay lahatsoratr'i Kalsoom – Mila mamadika ny alahelony ho fandraisana andraikitra i Pakistana.